MAPISAREMA 4 Munyengetero Werubatsiro | MINYENGETERO MARI
musha Munyengetero MAPISAREMA 4 Kunyengeterera Rubatsiro
Nhasi tichave takatarisa kuna Mapisarema 4, munamato wekubatsira. Iri ipisarema rine simba kwazvo raMambo David. Mune aya mapisarema, David anodana kuna Ishe kuti vabatsirwe panguva yekutambudzika. Iyo pisarema rinotidzidzisa kuvimba munaIshe munguva yerima uye nematambudziko ehupenyu hwedu. Iri zvakare Pisarema rinosheedza vanhu kuti vatendeuke, kubva pakuvimba nenhema uye zvisina maturo. Chero bedzi tikaramba tichivimba muna Ishe, tichagara tichikunda miedzo nematambudziko ehupenyu.
Kukumbira munamato webetsero uchishandisa Mapisarema 4 inzira inoshanda kwazvo yekuita matenga kuti auye kuzonunurwa. Minamato yega yega inotsigirwa nekunzwisisa kwemweya magwaro kunogara kuchiburitsa mhinduro. Ndosaka tisati taenda kunamato yekubatsira kubatsirwa kushandisa pisarema rechina, tichave kutanga takatarisa zvinoreva pisarema rechina nevhesi.
PSALM 4 KUSHINGA VANOTI VESE
Ndima 1: Ndipindurei Pandinoshevedza, O MWARI WEMANDARA Rangu! WAKADA VAVANZVIMBIRAI ROOM PANDAIVA. IVA NEMAHARA KUTI, UZVOZEI MIYO YEMinamato
Iyi ndiyo vhesi yekutanga muchitsauko chino uye tinogona kufunga kuti Hapana murume ane kodzero yekutarisira kuti Mwari amunzwe kana akasafona. Kune vanhu vazhinji vanotarisira makomborero aMwari nekuvimba sekunge kuti avanyengeterera nemoyo wose; uye zvakadaro vanhu vakadaro havanyengetera kana.
David paaive achitambudzika, akadzvanywa kana kuvharirwa, uye asingazive kwekutiza, Mwari akange aturikira uye akamupa nzvimbo kuti anzwe kusununguka. Iye zvino anoteterera netsitsi dzakafanana zvakare. Iye anonzwa kuti Mwari uyo akazviita mumatambudziko ekare anogona kuzviita zvakare, uye anomukumbira kuti adzokere ngoni dzake. Munamato uyu unoratidza kuvimba musimba raMwari uye unoratidza kuti ndizvo zvakanaka muminamato yedu kuti tiyeuke zvekare zviitiko zvekare sepasariro yetariro yekuti Mwari vaizonzwa zvakare minamato yedu.
Ndima 2: VANHU, VAKAWANDA VANOSHANYA SEI SHOKO RANGU RINONZI? UNGADAI ZVAKAWANDA UCHIDA VHENYU IZVI UYE URATShure PENYAYA?
Dambudziko riri pamusoro nderekuti ivo vanakomana vevanhu, varume vane simba uye vane chiremera, vane chiremerera nekukudzwa, uye vaive munzvimbo dzakakwirira, uye vachizvikudza nemazita avo ekuremekedzwa uye nekukudzwa, Ava vangave varume venyika vane pfungwa dzavo dzakaramba dziri pazvinhu zveizvi nyika. Izvi ndizvo chaizvo zvakaita nyika yedu nhasi. 2 Tim. 3: 2-4 inotsanangura vanhu ava chaizvo. Ivo havana nguva yaMwari uye tarisiro yavo yese haina maturo, uye vane zvipikirwa zvese hazvina maturo!
Kusvikira munhu, murume kana mukadzi, agamuchira Jesu Kristu seMuponesi wavo uye anova mwanakomana waMwari, ivo vachaita marudzi ese ezvinhu zvinonyadzisa Mwari. Izvi zvinogona kureva zvinhu zvakawanda. Ivo vanonyepa, kana kuti zvimwe vari kutsvaga vanamwari venhema. Zvinogona kuva zvese zviri zviviri. "Rudo zvisina zvazvinobatsira", zvinongoreva kuda nyika ino nezvose zvirimo.
Ndima 3: ASI ZIVAI KUTI ISHE VAKASHESA VAMWARI KWAVO; JEHOVHA ANONZWA PANDINODAI.
Izvi zvinopihwa kune avo, mundima yapfuura, akange adaidza "vanakomana vevanhu;" kureva vavengi vake. Uku ndiko kuvaratidza kuti kupokana kwavo kwaari kunofanira kunge kuri pasina, sezvo Mwari aive aronga kumuisa parutivi pabasa rake, uye nekudaro, vaizonzwa munamato wake wekusunungurwa uye kudzivirirwa.
Ndima 4: IVA ANGRY, ASI Chivi HAI; BATANA NEMIYO YAKO YEMWEDZESI PESE ZVAKO BEDU, UYE KUTI UYE KUTI URI KUTI Uite.
Ndima iyi yakatsamwa, uye kana uchifunga kuti une chikonzero chehasha. usarega kutsamwa kwako kuchikuendesa kuzviito zvekupandukira Mwari namambo wako. Funga nezvenyaya yacho zvakadzama usati waedza kuita. Kuva mune chimiro ichi hachisi chikonzero chekuzvipira kune manzwiro uye zvivi, Hasha uye zvivi hazvifanirwe kuenda zvakabatana.
Kutaurirana nemoyo wako zvinoreva kufunga mumoyo mako kuna Mwari. Dzimwe nguva, mumubhedha wedu, ndiyo chete nguva yakanyarara iyo yatinogona kufunga mumoyo yedu nezvaMwari.
Ndima 5: BATSIRA REMAHARA REMAHARA UYE KUTENDA KWAKO KUTI URI NAJESU.
Zvibayiro zvokururamisa kuita chaiko kuedza kuti usatadza nekuti kururama kunofadza Mwari. Kururama kwedu kwechokwadi, sezvatakambokurukura, hakuzi kwakanaka zvakakwana asi kugashira kururama kwedu kubva kuna Jesu Kristu. Akatora zvivi zvedu uye isu takave nokugamuchira kwake kururama. Kuvimba kunopfuura kutenda. Kuzorora munaJesu, uchiziva kuti Akakuponesa. Kuvimba kuziva mumoyo mako kuti zvese zvakanaka. Hatigone kuvimba nemunhu. Kuvimba kwedu kunofanira kuva muna ISHE Jesu Kristu. Vimba naJehovha nomoyo wako wose, uye iye achakuitira mubairo
Ndima 6: KUNE VAKAWANDA VANOTI, ”O KUTI TINGAONA ZVAKANAKA! SIMUDZIRA KUMWE CHIEDZA CHENYU CHETE PAMUSORO PEDU, ISHE.
Munyori wepisarema pano anoreverera kune vazhinji vari kutarisa kuna Mwari kuti runako rwake ruve pamusoro pavo. Vese vanomirira Ishe panguva yekutambudzika, havanganyadziswi.
Ndima 7: VAKAKURA KUSVIRA YAKO YAKABUDA MUYO YEMOYO VAVA UYE VAVENGA DZVO ZVINOGONA KUTI DZVINOGONA
Ndima iyi iri kutaura pamusoro pekupa Kristu kwaakapa mweya yedu izvo zvaida uye zvaishuvira. Iye zvino tinowana mufaro izvo zvinhu zvepanyika zvanga zvisingakwanise kuburitsa. Tine runyararo rwehana, uye nemufaro muMweya Mutsvene, isu parizvino tagutsikana zvisingatauriki muufakazi hwerudo rwako kumweya wangu; kupfuura vanhu vepanyika vanayo munguva yekukohwa kukuru.
Ndima 8: Mune Runyararo, ini ndichaverengera RUVE DLEU uye ROPA; KWAZVO ZVESE, ISHE, NDISVIKEI KUSVIKIRA PAKUSHURE
Iyi ndiyo vhesi yekupedzisira yePisarema 4 nekusimbisa kwayo kuti varume vazhinji vanovata sei kuti varere zuva nezuva, nekuti pasina zororo hupenyu hahugone kuchengetedzwa; asi vashoma vanovata pasi nerugare. rugare nehana yavo pachavo uye nerunyararo kuna Mwari, nekuti isu hatina simba rekuzvidzivirira, asi zvakadaro takanzwa kuvimbiswa kuti taizoponeswa, nekuti takavimba chose muna She. Panguva iyoyo David aive nemakomborero maviri makuru, kuzorora nehope uye kuvimba naIshe
NDINODAI KUTI NDISHANDZE KUSHANDISA IYO PSALM 4?
Paunoda kubatsirwa maererano nenhamo
Paunoda runyararo kuti ruvezve muhupenyu hwako
Paunenge uchida kuchengetedzwa naMwari
Paunenge uri mukutambudzika uye unofanirwa kutendeuka panzira dzako
PSALM 4 MINYENGETERO:
Kana iwe uri mune chero eaya mamiriro akanyorwa pamusoro kana anopfuura, ipapo aya ane simba pisarema 4 minamato ndeyako:
Kumbira kuregererwa kwenzira dzawakapindura nokutadza mukutsamwa kwako.
Ndinzwirei tsitsi, munzwe munyengetero wangu panguva yekutambudzika kwangu
Ishe, sezvo ndichivimba nemi, kukudzwa kwangu hakuzo kunyadziswa
Simudza mwenje weziso rako pamusoro pedu, Jehovha.
Simudza mwenje weziso rako patiri uye uwedzere mufaro mumoyo yedu
Baba ndibatsireiwo kubva kune vakanyanya kundikurira muzita raJesu.
Oh Lord be be my ikozvino rubatsiro nekurwa hondo dzangu nhasi muzita raJesu.
O Ishe, ndibatsireiwo uye mundinunure paruoko rwevane simba enyika ino muzita raJesu.
Ah ishe, nyarai vese vanoti nezvangu kuti hapana rubatsiro kwandiri muzita raJesu.
Aiwa, Ishe, tumira rubatsiro kwandiri kubva kunzvimbo tsvene uye undisimbise kubva muZion munaJesu zita.
Ah Lord, ini handina kana munhu pano pasi anozondibatsira. Ndibatsireiwo nekuti dambudziko rave pedyo. Ndisunungure kuti vavengi vangu varege kundikonzera kuchema muzita raJesu.
Ah Ishe musanonoke kundibatsira, nditumire rubatsiro nekuchimbidza uye nyararai vanondiseka muzita raJesu.
Ah Lord! Usandivanzira chiso chenyu panguva ino yekuyedza. Ndinzwirei tsitsi, Mwari wangu, simuka mundidzivirire nezita raJesu.
O Ishe, ndiratidzei tsitsi dzenyu, ndimutsire vabatsiri panguva ino yehupenyu hwangu muzita raJesu.
Ah ishe, tariro yakadzoserwa inorwara moyo, apo ishe nditumire rubatsiro nguva isati yanonoka kwandiri muzita raJesu.
Ah Lord! Bata nhovo uye bhurandi uye simudza rubatsiro rwangu muzita raJesu.
Ah Ishe ndibatsirei uye mundishandise kubatsira vamwe muzita raJesu.
Oh Lord, kurwa nevari kurwisa nema destiny assist angu nhasi muzita raJesu.
Ah Ishe, nekuda kwekubwinya kwezita renyu, ndibatsireiwo panhau iyi (taura izvozvo) muzita raJesu.
Ah Ishe, kubva nhasi, ini ndinoparidza kuti ini handifi ndakashaiwa rubatsiro muzita raJesu.
Previous nyayaMAPISAREMA 3 Kunyengeterera Rubatsiro
inoteveraMapisarema 86 Iwo Mharidzo Ndima Ndima
Theresa Chidima Chivabvu 16, 2020 Na1: 16 am
Ndibatsireiwo kunamatira kune vese vana kuti Mwari vavape nzira dzakakodzera uye dzaMwari uye kuti ivo vazive uye vashumire Mwari nekuti ivo chizvarwa chinotevera chinopa mbiri zita raIshe wedu Jesu Kristu.
Gloire sirivahani muhindo Kubvumbi 27, 2021 At 12:28 pm
Merci beaucoup pour votre aide mweya